Masiriin waa'ee hidha guddichaa irratti yaada haaraa dhiyeessite - BBC News Afaan Oromoo
Masiriin waa'ee hidha guddichaa irratti yaada haaraa dhiyeessite
Goodayyaa suuraa Ministiroota ajaa alaa Itoophiyaa fi Masirii
Ministirri dhimma alaa Masirii Saamii Shukrii marii gitasaanii Dr Warqinaa gabayyoo waliin taasisaniin, yaada Mr Shukriin salphaafi hojiirra ooluu ni danda'a jedhan Itoophiyaanis akka ilaaltu Dr Warqinaan ibsaniiru.
Oggantoonni biyyoota lameeniiyyuu dhimmichaaf xiyyeefannaa olaanaa kennuun hojachaa jiru kan jedhan Saameeh Shawuukrii, hojiiwwan birbadduummaa, walamanamummaa bu'ura taasifamanii fi seeroota adduunyaa hordofan hojatamaniiru'' jedhaniiru. Haa ta'u malee garuu mariiwwan baatii 10n darban taasifaman osoo bu'aa garii hinargamsiisiin hafusaanii ibsaniiru.
Ministirri Dhimma Alaa Itiyoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyoo gama isaanitiin, yaaddoon ijaarsi hidha guddichaa umuu akka hinjiraannee ibsuun ''waliigalteen yoo dhibuus adeemsa seeraa hordofuun hiikuun ni danda'ama. biyyoota lamaanituu ummanni dheekkamu hinjiraatu. Itoophiyaanis hojiin Masirii miidhuuf hojjattu hinjiru,'' jedhaniiru.
Ummanni biyyattii parsantaa 96 ta'u naannawa gammoojjii kan jiraatuufi jireenya isaaniis laga abbayyaa irratti kan hundaa'ee ta'u kan dubbatan ministirri Masirii kun, ''ummanni Masirii dheekameera jechuu yoon baadheelleen yaaddoo irratti kufuusaa dubbachuun danda'a,'' jedhaniiru. haa ta'u amlee sochii misoomuu Itoophiyaas akka simatan beeksiisaniiru.
Dhimmichi kan biyyoota lamaanii qofa akka hin taane kan dubbatan ministeeronni lamaan, mariifi waliin hojjechuun furmaataa akka carraaqan ibsaniiru. Furmaata siyaasaarratti hundaa'e osoo hin taane qorannoo saayinsiirratti hundaa'e akka qophaa'uufi fudhatama argatu Saamii Shukurii ibsaniiru.
Yaanni haarawaa sochii hanga ammaatti harkifataa ture dafanii gara furmaataatti galuuf kan gargaaru, salphaafi ilaalcha siyaasaarraa kan fagaatee ta'ee hojiirra oolchuun akka danda'amu Shukuriin ibsaniiru.
Dhimmicha siyaasaafi gaggeessitoota qofaaf kan dhiifamu akka hin taane ibsuun, "Bu'aa qorannoo kamiyyu dhaabbata jaarmiyaa addunyaa akka qoratu biyyoonni sadan eyyamanii irratti walii galan Misir ni fudhatti," jechuun mirkaneessaniiru.
Dr. Warqinaa Gabayyoo gamasaatiin, "Hidhaa Haaromsaa ilaalchisee ifa ta'uudhaaf yaalaa jirra.
Yaada wixiinee amma dhiyaate kana ni ilaalla. Dhimma biyyoota sadanii waan ta'eef of eeggannoon qabamee ilaalamuuti irra jiraata," jedhan.
Saawudiin himannaa bilbila sooreessa addunyaa butte jedhamu haalte
Betty G'n tarree weellistoota dubaraa ciccimoo Afrikaa keessa galte
Qorannoon haaraa argame 'kaansarii hunda yaaluu danadeessisa'
Paartiin 'Illuminaati' wajjin hidhata qabachuun himatame bilisa bahe
'Namoonni erga du'anii akkuma ijaafi kalee isparmii isaanii akka arjooman hayyamamuu qaba'
Iraan misaa'eela xiyyaara Yukireen haleele adda baafte